Cawad oo ka hadlay Kiiska Dool oo Weji Gabax ku keenay dowladda Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa u sheegay idaacadda VOA Somali inaan shaqada laga cayrin Cabdullaahi Dool oo ka tirsanaa shaqaalaha xafiiskiisa balse la beddelay dhowr sababood dartood.
Wasiirka ayaa sheegay inay sababahaas ka mid yihiin inuu muddo saddex bilood ah ka maqnaa shaqada oggolaansho la'aan iyo farriimo uu ku qoray twitter-ka, oo wasiirku sheegay inay weji gabax ku ridday wasaaradda.
Warsidaha Garowe Online ayaa 31-kii March soo qoray [Halkan ka akhri] in Cabdullaahi Dool uu bartiisa twitter-ka ku qoray farriin uu ku taageerayo in Soomaaliya xiriir diblomaasi la yeelato Israel, sidaasna shaqada looga eryey.
Safiirka Soomaaliya ee Geneva, Faaduma Cabdullaahi ayaa dhowaan ka aamustay qaraar golaha xuququda aadanaha ee QM uu ku cambaareeyey aqoonsiga madaxweyne Donald Trump uu dhulka Golan Heights ee Syria ugu aqoonsaday dhul Israel, taasi oo keentay in safiirka looga yeero Muqdisho.
Wasaaradda arrrimaha dibedda ee Soomaaliya, ayaa markaas kadib bayaan ku sheegtay inay mowqifkeeda rasmi ah ee buuralayda Golan Heights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay Syria, isla markaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dawladda Israel.
Baaritaanka uu wafdiga Midowga Afrika ka sameynayo Soomaaliya
Soomaliya 20.07.2019. 20:03
Guddigan oo ka kooban 30-xubnood ayaa laba maalmood oo ay dalka joogan waxay daraasad ka sameyn doonan saddex arrimood.
DF oo u sheegtay Haysom inaan Somalia laga rabin, kana sii shaqeyn karin
Soomaliya 01.01.2019. 22:37
Villa Somalia oo lagu dhaliilay inay ka gaabisay xalinta khilaafka dalka ka jira
Soomaliya 19.11.2018. 11:22
Soomaaliya oo xiriirka diblomaasiysadeed u jartay Guinea
Soomaliya 04.07.2019. 16:44
DF oo Heshiis ula gashay Shirkad ajnabi labo arrimood dartood
Soomaliya 22.08.2018. 16:26
Farmaajo oo lagu booriyey in uu caddeeyo "tuhun" ka jira kiiska badda 02.06.2020. 10:20